Tayada Sare Isticmaalka AV Fistula Cirbadda waxay soo saartaa warshad iyo soosaarayaasha | Sanxin
Keliya Isticmaal AV Fistula Cirbadaha Fistula
Isticmaal keli ah AV. Noocyada Cirbadaha Fistula waxaa loo isticmaalaa wareegga dhiigga iyo nidaamka wax soo saarka dhiigga si looga soo ururiyo dhiigga jidhka bini'aadamka isla markaana loogu soo gudbiyo dhiigga la farsameeyay ama qaybaha dhiigga dib loogu soo celiyo jirka aadanaha. Qalabka Fistula ee loo yaqaan 'Fistula Needle Sets' waxaa laga isticmaali jiray xarumaha caafimaadka ee gudaha iyo dibedda muddo tobanaan sano ah. Waa shey bislaaday oo ay si weyn u adeegsadaan machadka caafimaadka sifeynta bukaanka.
Isticmaalka keli ah ee loo yaqaan 'AV Fistula Needle Sets' ayaa loo isticmaalaa wareegga dhiigga iyo nidaamka dhiigga si looga soo ururiyo dhiigga jidhka bini'aadamka loona soo gudbiyo dhiigga la farsameeyay ama qaybaha dhiigga loogu soo celiyo jirka aadanaha. Qalabka Fistula ee loo yaqaan 'Fistula Needle Sets' waxaa laga isticmaali jiray xarumaha caafimaadka ee gudaha iyo dibedda muddo tobanaan sano ah. Waa shey bislaaday oo ay si weyn u adeegsadaan machadka caafimaadka sifeynta bukaanka.
◆ Cirbad fiiqan oo laba-gees leh oo dhuuban ayaa yareysa xanuunka iyo dhaawaca unugyada.
Qalabka badbaadada daboolka ee gaarka ah si looga hortago dhaawaca iatrogenic illaa inta ugu badan.
◆Daloolka gadaal ee oval iyo naqshadeynta baalka wareega ayaa si wax ku ool ah u fududeyn kara hagaajinta socodka dhiigga iyo cadaadiska, taas oo faa'iido u leh hagaajinta xagasha cirbadda iyo hubinta tayada sifaynta. tuubooyinka
◆ Saliida silikoonka waxaa lagu farsameeyaa silsilada labaad. Tuubooyinka irbadaha waxaa lagu subagaa qaabeynta teknoolojiyad gaar ah. Si loo hubiyo in cirbadda cirbadkeedu dhan yahay, kormeer weyne ballaaran ayaa la sameeyaa
◆ Daaweynta silicinta wanaagsan iyo isku midka ah, isku xirnaanta wanaagsan, yaree caabbinta daloolka.
◆ Midab kala duwan leh, oo sahlan in lagu garto moodooyinka cirbadaha iyo tilmaamaha
Qiyaasta AV Fistula Cirbadaha Fududeeyaa iyo qeexitaannada:
Nooca guud: Buluug 15G, Cagaar 16G, Jaale 17G, Casaan 18G.
Nooca badbaadada: Buluug 15G, Cagaar 16G, Jaale 17G, Casaan 18G.
Nooca garabka oo go'an: Buluug 15G, Cagaar 16G, Jaale 17G, Casaan 18G.
Nooca garabka wareega: Buluug 15G, Cagaar 16G, Jaale 17G, Casaan 18G.
Hore: Budada heemodialysis (oo ku xiran mashiinka)
Xiga: Xidhmada kateetarka xididka dhexe (sifeynta)
Tuubada ayaa loo dejiyay hemodialysis
Qalabka tubbada loogu talagalay HDF